Olee otú iji gbanyụọ ike disk mbanye ohere ala ngosi na Windows 10? | Gosi Top
Olee otú iji gbanyụọ ike disk mbanye ohere ala ngosi na Windows 10?
Gaa Ịma Ọkwa & omume ntọala. Ihe kacha ụzọ mee nke a bụ site na iji kọmputa ede Ịma Ọkwa na Cortana search. I nwere ike na-na-na Ịma Ọkwa & actions screen by pressing Windows Key + m -> System -> Ịma Ọkwa & omume .
Pịgharịa gaa na ala na ngosi & actions screen and click on Windows Explorer.
Ahọrọ ịgbanyụ amamọkwa ma ọ bụ ịgbanwe ntọala maka Windows Explorer ona gị mkpa.
Nke a ga-gbanyụọ ngosi maka ala ike disk ohere, Otú ọ dị nke a ga-gbanyụọ niile na Ịma Ọkwa si Windows Explorer.
At the moment there is no settings to turn off the notification for a single drive. If you have a solution to turn off the notification for a single drive, biko, ka anyị mara na ihe n'okpuru.